Camp provincial des secondaires (cps) 2017 - Groupe Biblique Camp provincial des secondaires (cps) 2017 - Groupe Biblique
Home Uncategorized Camp provincial des secondaires (cps) 2017
Fanamafisana ny fampitana ny Vina GB
Fanamafisana ny andraikitra miandry ny GBS sy fampandehanana ny asa eo anivon’ny GBS tsirairay avy
Mpanatrika vonona handray andraikitra no andrasana amin’izao CPS izao
Fampiorenana ny mpikambana GBS ka ho tafatoetra ao amin’i Kristy ary ho vavolombelony tokoa manoloana ny iraka eny an-tsekoly.
Fampitomboana ny fifaneraserana, ho fizarana sy fifanakalozana traik’efa
Fiaraha-mibanjina ny fanamby lehibe iraisana izay miandry.
SOKAJY VOAKASIKA :
Ity CPS ity, tahaka ny tamin’ny CRS dia karazana ZAIKA KELIN’NY GBS
MPIKAMBANA IRERY IHANY no manatrika azy izay hiofana sy handinika akaiky ny raharahan-tokatranony (EXCLUSIVEMENT POUR LES MEMBRES)
Izany hoe izay efa nahavita Confession d’Ahésion ihany no manatrika azy
(Hajaina sy arahina tsara ny dingana rehetra amin’ny fampidirana mpikambana: FAMAKIANA SATA, FITSIPIKA ANATINY UGBM, FOTO-PINOANA UGBM; FAHARESEN-DAHATRA TSY MISY FEPETRA AN’IREO ; FANAOVANA DINIKA ( ENTRETIEN); FANAMBARANA AM-PAHIBEHIMASO izany).
Noho izany: tsy voatery handefa solo-tena be dia be mba hisorohana ny hamehana sy mandray mambra maimaika nefa mbola tsy tokony ho mpikambana akory ilay olona.
Afaka mandeha izay efa classe de Termilale saingy jerena manokana sy atao LAHARAM-PAHAMEHANA izay olona haharitra sy hiandraikitra, hanohy ny asa eo an-toerana amin’ny taona ho avy (2017-2018)
Anjaranareo eo an-toerana no mifandamina ny amin’izany.
Raha misy olon-dehibe manaraka ny GBS hamonjy ny CPS dia afaka manatrika ny fotoana sy ny programa rehetra izy fa tsy manana andraikitra manokana ao anatiny.
FOTOANA SY FAHARETANY :
Hatreto ny daty napetraka dia ny: 04 – 12 Aogositra 2017 (Saika daty hiraisana izy io) ankoatry ny any Toamasina (03 hatramin’ny 11 Aogositra 2017)
Maharitra FITO ANDRO FENO miampy tapak’andro ROA (fahatongavana sy fodiana).
Ny programa voamana avy aty amin’ny Foibe dia mifanaraka amin’io faharetan’ny fotoana io.
N.B: Hita sy tsapa fa miha zaza dia miha zaza ny GBS raha ny sala-taonan’ny GBS ankehitriny no jerena. Ho fitsinjovana azy ireo sy mba tsy habosesika ny programa izay voalahatra dia 7 andro no hita fa antonona indrindra (Jereo ny Fandaharam-potoana)
Ny sora-bola 40 000 Ar miampy vary 16 Kapoaka dia soso-kevitra sy tari-dalana avy aty amin’ny Foibe ihany. Mety tsy mahalany izany 16 kp izany ny gao-madinika
Ny Local tsirairay anaty FARITRA no tena mahita izay mety aminy. Izany hoe mila mifandinika izay miaraka manatrika ny CPS ary ankinina amin’ny kômity Mpikarakara ny mandinika izay saran-dasy hita antonony.
Oh: Toamasina izao dia vola 30 000 Ariary ny saran-dasy. (Azafady Jereo takelaka Emploi du temps “misy fomba nikajianay ny mety ho fandaniana ka ahafahanareo miainga)
Miomana amin’ny lafiny rehetra izay rehetra voakasiky ny CPS (vavaka, ara-bola, fitaovana, toerana): GBS, mpanomana, mpiandraikitra isan-tsokajiny
Raha misy ny manao fitadiavam-bola iraisana (efa azonareo ny toro-marika mahakasika izany) dia aoka mba tsy hanelingelenana ny fianaranareo izay hetsika izay.
Ny tao-trano tsy efan’ny irery koa dia miobom-po sy miara miatrika izao hetsika lehibe izao amintsika rehetra manerana ny Nosy izahay.
NY FOIBE UGBM